Henrikh Mkhitaryan tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Home TAFIKA ASIA FOOTBALL Henrikh Mkhitaryan tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Nohavaozina farany teo Desambra 1, 2019
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana;'Micki'. Ny tantaran-tantaran'i Henrikh Mkhitaryan momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny lalao mavitrika nataon'i Henrikh Mkhitaryan ary manampy ny fahaiza-manao, saingy vitsy no mihevitra ny fiainany ivelan'ny toerana izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Voalohandohan'ny fiainana
Henrikh Mkhitaryan dia teraka tamin'ny 21st of January 1989 tany Yerevan, renivohitr'i Armenia ho an'ny ray aman-dreny - mpilalao baolina taloha, Hamlet Mkhitaryan (ray) ary Marina Taschyan (reny).
Tao 1989, raha vao volana vitsivitsy monja dia nifindra tany Frantsa ny fianakaviany noho ny fifandonana nisy teto Armenia. Ny rainy dia nilalao dimy taona ho an'i Valence tamin'ny fizarana faharoa nataon'i Frantsa.
Araka an'i Henrikh .."Raha izaho no 4, dia nitomany foana aho rehefa nandao ny fampiofanana klioba ny raiko. Isaky ny maraina dia hoy aho hoe, 'Dada, ento miaraka aminao aho. Masìna ianao, raiso re aho.
Tamin'io vanim-potoana io, tsy dia tiako loatra ny lalao baolina kitra, te-hiaraka amin'ny raiko aho. Saingy tsy te ho variana izy nandritra ny fampiofanana noho ny alahelony momba ahy nandositra, ka noho izany dia nanamboatra drafitra hendry hamitaka ahy izy. Indray maraina, hoy aho, 'Dada, ampianaro aho.'
Hoy izy hoe: 'Tsia, tsia. Tsy misy fiofanana ankehitriny, Henrikh. Tonga any amin'ny fivarotana lehibe aho. Hiverina aho. ' Nandositra tamin'ny fiofanana izy ary niandry ... ary niandry. Nody izy rehefa afaka ora vitsivitsy. Tsy misy kitapo fivarotana. Very izany. Nanomboka nitomany aho.
'Nandainga tamiko ianao! Tsy nandeha tany amin'ny fivarotana lehibe ianao! Nandeha nilalao baolina kitra ianao! '
Ny rainy dia nanao izany noho ny noraisin'i Henrikh kely mba hijery hetsika fialamboly izay tiany amin'ny maha-zaza azy.
Hamlet Mkhitaryan sy Henrikh lahy
Hatramin'izany andro izany tany amin'ny paroasy, i Hemlet dia nanomboka naka ny zanany lahy tamin'ny fiofanana. Tsy ela i Henrikh dia nanatsara ny fitiavan'ny baolina kitra ary nanomboka nanaraka ny dian-tongotry ny rainy rehefa nijery azy lamasinina. Te ho lasa mpilalao baolina aho ary misaotra ny ray aman-dreniko, izay nanampy ahy hahafantatra izany nofy izany. "
Tian'ny ray aman-dreniny ho baolina baolina ho azy izy, ary koa manantitrantitra ny fanabeazana fa tsy maintsy ho an'ny zanany izany. Nianatra ny fomba hampifandraisana ny fianarana sy ny baolina kitra amin'ny fomba mety indrindra i Miki. Nobeaziny ho tovolahy mamirapiratra izy.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Rising to Fame
Nianatra baolina avy tamin'i Hamlet rainy izy izay mpikomy malaza nandritra ny androny tao amin'ny 1908. Indrisy anefa, ny fahafatesan'ny rainy teo aloha dia niantraika taminy tamim-pitiavana (Ny antsipiriany momba ny fahafatesany noresahina taty aoriana). Henrykh dia mahatsapa fa raha mbola velona ny rainy, "Hafa mihitsy ny zava-drehetra." Ao amin'ny teniny, "Ny taona taorian'ny nahafatesan'ny raiko dia nanomboka fanofanana baolina kitra aho. Izy ilay mitondra fiara ho ahy, izy no sampy. Hoy aho tamin'ny tenako: mila mihazakazaka mitovy aminy aho. Tsy maintsy mitifitra azy aho. "
Ianao, ny rainy dia nanome torohevitra mahasoa avy amin'ny fomba fijery matihanina talohan'ny nahafatesany. Afaka nankafy ny rainy fotsiny izy nandritra ny taona 7. Maty ny rainy raha vao 7 izy. Ireo olona izay nahita ny Mkhitaryan sy ny rainy, dia nilaza fa ny endrik'izy ireo dia mitovy tanteraka. Hoy i Miki indray mandeha: "Mino aho fa mahita ahy izy ary mirehareha amiko ..."
Rehefa niverina tany Yerevan avy any Frantsa i Henrikah, dia efa nahalala ny asa nananany. Mkhitaryan dia nanatevin-daharana ny club club Yevanjana FC Pyunik tao amin'ny 1995. Avy eo dia nahita ny fivelarany amin'ny iray amin'ireo mpilalao mahay indrindra ao amin'ny firenena izy.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fianakaviany manontolo dia manana baolina matihanina amin'ny baolina matihanina. Raha nahomby tany an-tsaha izy sy ny rainy, dia nahatonga ny vehivavy tao amin'ny fianakaviany hamelona azy io. Andeha aloha hiresaka momba azy ireo;
RAY: Ny Hamlet Mkhitaryan, rain'i Henrikh dia mpikomy am-bava sy manan-danja taloha FC Ararat Yerevan nandritra ny 1980. Mpanafika madinidinika kely izy. Miaramila Sovietika Ny gazety iray dia nanome voninahitra azy "Knight of Attack" loka ao amin'ny 1984.
Izy sy ny fianakaviany indray niaina tao amin'ny Kentron distrikan'i Yerevan, izay akaikin'ny kianja Hrazdan Amenia. Ireo izay nahita horonantsary Hamlet sy Henrikh dia nilaza fa ny endrik'izy ireo dia mitovy amin'ny an'ny hafa. Indrisy fa maty tamin'ny fivontosan'ny atidoha i Hamlet tamin'ny taona 33 fony fito taona i Henrikh.
Ity dia fitantarana avy amin'i Henrikh amin'ny fahafatesan'ny rainy.
"Ny fotoanako sy ny raiko dia tena manan-danja, nefa koa fohy. Rehefa feno enin-taona aho, dia nilaza tamiko ny ray aman-dreniko fa handeha hody any Armenia izahay. Tsy tena takatro ny zava-nitranga. Tsy nitsahatra nilalao baolina ny dadako, ary tao an-trano foana izy. Tsy fantatro izany, fa ny fivontosan'ny atidoha kosa no tao an-tsaiko. Nipoaka haingana ny zava-drehetra. Tao anatin'ny herintaona dia lasa izy. Satria mbola tanora aho dia tsy azoko tanteraka ny hevitry ny fahafatesana. Tsaroako ny nahita ny reniko sy ny zokiko vavy nitomany foana, ary nanontany azy ireo aho hoe: "Aiza ny raiko?" Tsy nisy afaka nanazava izay nitranga. Isaky ny andro dia nanomboka nitantara tamiko ny zava-nitranga izy ireo. Tsaroako ny reniko nilaza hoe, 'Henrikh, tsy hiaraka amintsika velively izy.' Ary nieritreritra aho hoe, tsy misy? Tsy mbola toy izany ela be izany raha fito taona ianao.
I dia nanana lahatsary maro be izy nilalao tany Frantsa, ary nijery azy ireo matetika aho mba hahatsiaro azy. Roa, intelo isan-kerinandro aho no nijery ny lalao, ary nanome ahy fahasambarana izany, indrindra rehefa nasehon'ity fakantsary ity raha nankalaza ny tanjona izy na namihina ny mpiara-miasa taminy. Amin'ireny video ireny dia nipetraka ny raiko. nanao hoe: Henrikh Mkhitaryan
rENY: Ny reniny Marina Taschyan dia nandray ny andraikitry ny ray sy ny reny taorian'ny nahafatesan'i Henrikh dadany.
Araka ny azy."Sarotra be izany satria ny reniko dia tokony ho reny sy ray ho ahy. Tena sarotra ho an'ny reny ny manao izany eo amin'ny fiarahamonina. Tsy maintsy nitazona ahy izy, ary indraindray dia sarotra tamiko ny toy ny ray. Nila andro aho rehefa tonga nody avy tamin'ny fiofanana niteny hoe: 'Ah, sarotra be izany. Te hiala aho. '. Ary hoy ny reniko: 'Tsy miala ianao. Tsy maintsy miasa foana ianao, ary ho tsara kokoa rahampitso.' Taorian'ny fahafatesan'ny raiko dia tsy maintsy niasa ny reniko hanohana ny fianakavianay. Ka dia nanomboka niasa tamin'ny federasiona baolina kitra Armeniana izy.
Marina Taschyan dia mandrapahatonga ny lehiben'ny sampana ao amin'ny departemantan'ny ekipam-pirenena ao amin'ny federasiona baolina kitra Armeniana. Henrykh Mkhitarvan nizara ny sarin'ny reniny niaraka tamin'ny reniny tao amin'ny Twitter mba hankalaza ny fitsingerenan'ny reniny. Tao amin'ny lahatsoratra, hoy izy "Ny fitiavan-dreny dia tsy misy na inona na inona eto an-tany, reny be taona, reny". Ny ankamaroan'ny mpanaraka azy dia tsy nihevitra fa reniny. Izany dia satria mijery tanora izy.
anabaviny; Ny rahavaviny dia miasa ao amin'ny foiben'ny UEFA. Tiany ny mahazo fiainana. I Miki dia manampy azy ara-bola indraindray izay tena ilain'ny ankamaroany. Tao anaty tafatafa iray,
Niteny azy tamin'ny teniny izy ..."Tsy misy zavatra toy ny hoe 'anao sy ny ahy'. Fianakaviana izahay, ary ny zavatra rehetra azonay dia ny ".
Micki sy Monika dia nizara ny fahatsiarovana mahafinaritra amin'ny fahazazany. Samy mahafinaritra be izy ireo, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Henrikh Young (havia) sy Monika (ankavanana)
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Relationship Life
Henrikh Mkhitaryan no lehilahy ankizivavy tiany hanambady ... Na dia, ry zazavavy dia aza maika hiantehitra aminy - Henrikh tsy manam-potoana ho azy ireo! Na ankehitriny na tsy ho ela. Mchitaryan dia mifantoka amin'ny asany ary tsy manambady. Ary tsy nieritreritra ny hiankavia amin'ny olon-kafa izy mandra-pahatongany amin'ilay vanim-potoana faran'ny 30 izay nolazainy taloha. Nahita tovovavy maro ianao nahita anao. Manantena izahay fa gaga ianareo fa tsy manana vady
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Mpitarika Chess
Raha ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny mpilalao baolina eto amin'ny planeta, dia lazaina fa miavaka ny Mkhitaryan. Manana fahaiza-misaina tsara kokoa izy. ny fahiratan-tsaina eo amin'ny sehatry ny lalao dia mifandray amin'ny azy chess fahaiza-manao. Amin'ny teny hafa, ny fitiavan'i Henrikh Mkhitaryan cHess Mifanaraka amin'ny fepetra iray aminy faharanitan-tsaina. Tsy mahagaga raha nampiseho ny mpankafy azy tamin'ny alalan'ny baomba maingoka izy.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Ny sampy
Somary mahavariana ho an'ny mpilalao baolina kitra midadasika any Frantsa, ny sampy mpilalao baolina an'i Mkhitaryan dia teo aloha Real Madrid CF sy ny mpilalao baolina kitra Frantsay World Zeldine Zidane.
Araka ny filazan'i Micki ..."Tamin'ny fotoana nahatongavako tamin'ny 10 taona aho dia baolina kitra ny fiainako manontolo. Fampiofanana, famakiana, fijerena, na dia milalao baolina kitra amin'ny PlayStation aza. Nifantoka tanteraka tamin'io aho. Tiako indrindra ireo mpilalao fanatanjahantena - ny maestros. Te-hilalao foana aho tahaka an'i Zidane sy Hamlet. Tena nankasitraka ny lalao nataon'i Zidane aho ary ny zavatra nataony teo amin'ny sehatra. Izy dia toy ny mpanao majika tamiko. Ny sarin'ny lalao midina midadasika kokoa dia miresaka bebe kokoa amin'i Zidane raha toa ka manafatra ny fomba fijerinao ny momba ny dadako taloha. "
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Highly Educated
Ny fianakaviana Mkhitaryan dia niverina tany Yerevan, renivohitr'i Armenia avy any Frantsa tao 1995. Tamin'io taona io ihany koa no nanoratra ny Mkhitaryan Ivon-toerana momba ny kolontsaina ara-batana any Armenia. Nahazo diplaoma tamin'ny fandaharam-pampianarana diploma izy ary nandeha niditra mivantana mba hianatra toekarena ao amin'ny sampan'i Yerevan an'ny St. Petersburg Institute.
Taorian'ny fizarana grady dia namolavola drafitra ihany koa i Miki hanaraka ny diplaoma hafa. Indrisy anefa fa tsy nitranga izany raha nilainy ny handray baolina matihanina matihanina kokoa noho ny niantsoana azy. Io vanim-potoana io dia nanamarika fanoitra lehibe tamin'ny nofinofiny. Nandao ny klioban'ny tarika FC Pyunik (any Armenia) izy ary nandeha tany Okraina mba hilalao ny Club Football Metalurh Donetsk izay nanome azy tolotra mendrika izay azony.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Mandany alina amin'ny Club Training
Mkhitaryan dia fantatra fa tsy mipetraka ao amin'ny efitranony manokana fa mandany ny sasany amin'ny alina ao amin'ny fampiofanana ny klioba. Nataony izany ho an'ireo klioba rehetra izay notanterahiny.
Raha niresaka tamin'ny gazety Armenian panorama.am tamin'ny Febroary 2017 izy dia nilaza hoe: "Satria lasa zavatra sampy aho ary maro no mijery ahy, aleoko mifantoka fotsiny amin'ny baoliko kitra mba hahafahako mampiaiky azy ireo. Na dia midika aza izany hoe mandany alina amin'ny trano fanatobiana entana. Ho an'ireo klioba rehetra noraisiko, dia hitako fa mihomehy ahy ny mpiray ekipa amiko rehefa mitandrina an'ity fitondrantena ity izy ireo. Izy ireo aza dia nanonona ahy ny Filoham-pirenena [amin'ny toerana fampiofanana]. "
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Ny niandohan'ny anarany
Mkhitaryan dia nomena anarana 'heno ' avy amin'ny mpankafy azy any Armenia. Nanaiky ilay anarana izy izay endrika fohy amin'ny anarany voalohany 'Henrikh'. Na izany aza, fantatra any Eorôpa izy Micki. Nanazava i Mkhitaryan tamin'ny resadresaka fa ny mpilalao Micki dia avy amin'ny mpitantana Borussia Dortmund teo aloha, Jürgen Klopp. Jürgen nanapa-kevitra ny hanome azy an'io anaram-bosotra io rehefa avy nitazana ny anarany 'Mkhitaryan' dia ela loatra vao miteny. Mkhitaryan dia namaly fa tsara ny mampiasa an'io anaram-bosotra io. Ny fankatoavana farany amin'ny solon'anarana dia tonga rehefa notandremana ny anaram-bositra nanamarina azy Instagram kaonty manana anarana nomena ahys micki_taryan.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Vao nilalao an'i Sao Paulo
Tao amin'ny 2003, Mkhitaryan, 14 taona, dia niatrika fitsapana tany São Paulo tany Brezila izay nahomby. Nirotsaka ho an'ny ekipa zandriny izy. Ity ekipa ity dia tia ny Oscar dos Santos Emboaba sy Hernanes. Niara-niady tamin'izy ireo izy. Ny fijanonany tao amin'ny fikambanana dia fohy kely. Henrikh Mkhitaryan dia niverina tany Pyunik, ny klioba any Armenia ao 2004. Izy no mpitantana an'i Mihai Stoichiţă izay nanizingizina ny fiverenany tany Armenia.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Polyglotte
Ny Mkhitaryan dia polyglotte iray efa voamarina, manana fahaizana miteny fiteny fito izy. Anisan'ireny fiteny ireny ny Armenianina, frantsay, portogey, rosianina, ukrainien, anglisy, ary alemà. Miki dia manavaka ny fahalalany ny Rosiana amin'ny renibeny, izay avy amin'ny Rosiana foko.
Nianatra ny fiteny telo voalohany izy (Armeniana, Frantsay ary Portiogey) nandritra ny fahazazany, ary ny efatra tamin'ireo dia nidina nilalao ho an'i Shakhtar Donetsk any Ukraine, Borussia Dortmund any Alemaina, ary Manchester United any Angletera.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Loka sy fiantrana
Ao amin'ny 2012, tamin'ny fanapahan-kevitry ny Filankevitry ny Tanànan'i Yerevan, ary amin'ny fampakarana ny tsingerintaona faha-2794 faha-tanàna, dia nomena ny Mkhitaryan "Olom-pirenena manan-kaja ao Yerevan" Lohateny, ho an'ny fahombiazany amin'ny baolina kitra ary ny fahombiazany amin'ny fanatanjahantena. Fanamarihana: Yerevan no renivohitr'i Armenia.
Mkhitaryan koa dia fantatra any amin'ny tanindrazany ho olona mendrika. Nandritra ny fialantsasatry ny baolina kitra, dia nahita fotoana hitsidihana ny faritry ny faritra misy ny Solviet teo aloha izy mba hanomezana fanomezana ho an'ny fianakaviana miaramila miaramila. Ny fitiavany dia nahazo azy ny loka 'Mediam-bahoaka NKR'.
Ny NKR dia midika (Repoblika Nagorno-Karabakh). Medaly nasionalin'ny Ministeran'ny Praiminisitra izy. Nomena ireo olona izay heverina ho mahery fo nasionaly.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Mitarika ny ekipam-pirenena Armeniana
Mkhitaryan no mpilalao horonan-tsarimihetsika malaza any Armenia, ka nahatratra ny tanjona 22 tao amin'ny lalao iraisam-pirenen'ny 64 hatramin'ny voalohandohany tamin'ny Janoary 2007.
Mkhitaryan dia nofinidy ho mpilalao baolina kitra Armeniana ho an'ny taona fito (isan-taona hatramin'ny 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ary 2016). Izy no nitarika ny ekipa nandritra ny taona maro ho kapiteny.
Ao amin'ny 2012, izy no nifidy ny mpilalao Shakhtar tsara indrindra tamin'ny mpankafy 2011-12. Tamin'io taona io ihany, nantsoina koa hoe Premier League Footballer an'ny taona izy. Ao amin'ny 2012, ny Mkhitaryan dia voatonona ho mpilalao XEUMX mpilalao UEFA avy amin'ny Diary UEFA Eoropeana 100-2012 UEFA. Ankoatra izany, izy dia nifidy ny mpilalao baolina kitra mahaleotena avy amin'ny Commonwealth an'ny taona 2012, ka nahatonga azy ho mpilalao baolina kitra Armeniana voalohany ho mpilalao mahay indrindra avy amin'ny firenena Sovietika. Nahazo ny loka indray izy ho an'ny 2013.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Ny drafiny hoavy
Mbola tanora ihany i Mkhitaryan dia manindry fa tsy manana fikasana hanohy hiasa amin'ny baolina izy raha vao efa nisotro ronono. "Tsy mahita ny tenako ho lasa mpanazatra aho, fa tsy kapoaka dite. Tsy tiako ny voloko haingam-pandeha haingana! " Fa kosa, fiainana aorian'ny baolina kitra dia mety ho ara-barotra ho an'ny Mkhitaryan, izay nahazo mari-pahaizana avy amin'ny Ivotoerana momba ny Kolontsaina ara-batana any Armenia ary koa nahazo mari-pahaizana momba ny toekarena ao amin'ny St Petersburg Institute.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Niaraka tamin'i Liverpool tao amin'ny 2013 izy
Tamin'ny fahavaratry ny 2013, ny Brendan Rodgers, mpitantana Liverpool indray, indray dia nanao ny Mkchitanan ny lasibatr'izany.
Tamin'izany fotoana izany, izy no mpilalao lehibe indrindra tao amin'ny sidina ambony indrindra tao Okraina ny vanim-potoana teo aloha, ka nahatratra ny tanjona 25 tao amin'ny lalao 29 ho an'ny Shakhtar Donetsk. Miaraka amin'ny tranga efa vita sy ny tatitra momba azy manidina any Anfield noho ny lohateny loharanon-kevitra ara-pitsaboana, dia nampalahelo ny olona. Ireo mpankafy Liverpool dia niravahana. Ny fifanarahana hanombohana ny fanantenana midadasika izay midika fa manaitra an'i Anfield dia nirongo ny mpitsara Borgen Dortmund teo aloha Jurgen Klopp. Nanolotra tolotra izay tsy nety i Jurgen ary nifidy ny Signal Iduna Park ho toy ny tranony ho avy izy fa tsy i Anfield.
Nanantitrantitra anao i Mkhitaryan fa tsy vola izany, fa ny baolina kitra baolina ao Dortmund no nahatonga azy nanaiky ny tolotra nataon'i Klopp.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Indray mandeha dia nijanona tao amin'ny Hotely niaraka tamin'i Jose Mourinho
Mkhitaryan, raha vao tonga tany Manchester United, dia nijanona tao amin'ny hotely Lowry nandritra ny herintaona. Ny fijanonany tao dia nanosika azy Jose Mourinho izay niara-nonina tamin 'ny fianakaviany tamin' io fotoana io ihany. Tamin'izany fotoana izany, ny antoko roa dia vaovao mba hiaina ao an-tanàna. Ny hevitra hijanonana ao an-trano alohan'ny hividianana na fanofana trano ao Manchester dia safidy ara-dalàna ho an'ny mpanankarena izay tonga any amin'ny tanàna lehibe hiasa. Araka ny nambaran'i Micky, "Jose nilaza fa tsy dia nahalala firy momba ilay tanàna izy talohan'ny nahatongavany teto. Nanoro hevitra ahy izy mba hijanona ao amin'ny hotely izay nandriany "
Na i Mourinho sy Mkhitaryan aza efa nahazo trano maharitra any avaratra andrefan'i Manchester.
Henrikh Mkhitaryan Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra - biography facts -Q sy As
- Misy zavatra mampihomehy na mampihomehy mitranga ve aminao hatramin'ny nifindranao an'i Manchester United? Angamba ireo antso sy karazana tsy mahazatra?
- 'Eny, mandray antso maro ... amin'ireo vahiny aho.'
- Ary inona no tadiavin'izy ireo?
- Te hahazo vola daholo izy ireo! '
- Inona no lazainao amin'izy ireo?
- Izaho dia mandà azy ireo. Ahoana no ahafahako manolotra vola amin'ny vahiny na maka vola fotsiny? Tsy hiverina intsony aho.
- Fatalista ianao, mino ve ianao?
- 'Eny Mazava ho azy. Ny daty nahaterahana dia namaritra ny hoaviko. Tahaka ny an'ny hafa rehetra, tokoa. Ny fiainana dia boky, ary mpilalao sarimihetsika isika izay milalao araka izay voasoratra. Mino koa ireo famantarana ny zodiazy aho. I'm Aquarius '
Daty navaozina: Novambra 25, 2019
Daty efa namboarina: 9 aprily 2020